मोदीको शपथग्रहण समारोहको एउटा कुनामा यी खास मान्छे पनि हुनेछन् ! - Sidha News
मोदीको शपथग्रहण समारोहको एउटा कुनामा यी खास मान्छे पनि हुनेछन् !
नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आज साँझ भारतको राष्ट्रपति निवासमा हुने शपथ ग्रहण समारोहको एउटा कुनामा पश्चिम बंगालबाट आउने केही खास अतिथीसमेत हुने भएका छन् । सो समारोहमा पश्चिम बंगालमा तृणमुल कांग्रेससँगको राजनीतिक द्वन्द्वमा मारिएका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित ५४ जना कार्यकर्ताका परिवारका सदस्यसमेत रहने भएका छन् । उनीहरुलाई प्रतिपरिवार दुई जनाका दरले सपथग्रहण समारोहमा उपस्थितिका लागि निम्तो गरिएको जनाइएको छ ।
‘‘मेरा पतिले मोदीजीको जितका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ । हामीलाई न्याय चाहिएको छ । प्रधानमन्त्रीले हामीलाई शपथ ग्रहण समारोहमा दिल्ली बोलाउनुभएकोले हामीलाई उहाँले न्याय दिनुहुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ,’’ हालै मारिएका चन्दन सावकी पत्नी आरती देवीले आँखाभरी आँसु पार्दै बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।
उनका पति पश्चिम बंगालको राजनीतिक हिंसाको पछिल्लो घटनामा मारिएका थिए । २६ मे का दिन मोटरसाइकलमा घर जाँदै गर्दा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । मोदीले पश्चिम बंगालबाट निम्तो गरेका यी सर्बसाधारणका परिवार बुधबार रेल चढेर दिल्लीतर्फ लागेका छन् । भाजपाले सो क्षेत्रमा सन् २०२१ मा हुने विधानसभा निर्वाचनलाई ख्याल गर्दै विशेष रणनीति अन्तर्गत उनीहरुलाई बोलाएको बताइएको छ ।